Ubuntu သင်တန်း — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited June 2010 in Project
ကိုစေတန်ရေ အူဘွန်တူး အသုံးပြုနည်း သင်တန်းလေးဖွင့်ပေးလေဟာ။ အကုန်မသင်နိုင်ရင်တောင် အခြေခံ command လေးတွေသင်ပေးပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့် သွင်းတာလဲ နဲနဲတိုင်ပတ်တယ်။ အဲဒါပါသင်ပေး။ :6:
ကျနော့် ပို့စ်လေးဟိုရောက်နေတယ် .. ဒီဘက်နဲ့ကိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီဘက်ကိုလာ merge လုပ်ပေးပါ။
ထောက်ခံကြောင်းပါခင်ဗျား ........... :6:
Bro တို့လုပ်တာနဲ့ Ubuntu ကြီးကို တော်တော်စိတ်၀င်စားနေကြပြီ။
ကိုယ်ရေးတဲ့ဇာတ်ကို ဆုံးအောင်ဆက်ကတော့ Bro တို့ရေ ..................
ဟုတ်ပ ubuntu သင်တန်းလေးဖွင့်သင့်ပါ ပြီ ။ mz မှာ Ubuntu ကတော်တော် popular ဖြစ်နေပြီ။ အနော် လည်းစိတ်၀င် စားပါတယ် ။
ဖွင့်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စိတ်၀င်စားလို့ စက်တစ်လုံးသီးသန့်ပေးပြီး တင်ထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုစေတန်ကြီးရယ် ပရိသတ်ကြီးကတောင်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျား
တစ်ခါတည်း လင်းနစ် သင်တန်းလေးပါတွဲဖွင့်လိုက်ပေါ့ဗျားမကောင်းဘူးလား............
ကျွန်တော်လည်း တက်ချင်ပါတယ်။ mz မှာ ubuntu သုံးတဲ့သူတွေ အရမ်းများနေတာပဲ သင်တန်းဖွင့်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် သင်ပါနော် ............
နောက်ဆို Window က
free မရတော့ဖူးဆိုတော့ Ubuntu ကိုပဲအားကိုးရတော့မယ် :P:):D
တစ်မဲ၀င်ပေးပါတယ်။ ubuntu သင်ဖို့။
သင်ပေးပါဗျို့။ ကျွန်တော်လဲ တက်ချင်ပါတယ်။ :d
ကိုစိုင်းကြီးကို သနားကြပါအုံးဗျို့။ အခုတောင် မျက်ကွင်းညိုနေပြီ။ ဂိမ်းဆော့ရလွန်းလို့။
Nwe Ni Soe wrote: »
free မရတော့ဖူးဆိုတော့ ubuntu ကိုပဲအားကိုးရတော့မယ် :):d
အမနွယ်နီရေ ဘယ်လို အလကား မရတော့မှာလဲ။ သိရင် နဲနဲလောက်ရှင်းပြအုံးနော်။
@ ကိုIsteinရေ .. မနွယ်နီရေးတာကို အဲလို criticize မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ M$ Windows License ကို ပိုက်ဆံပေး၀ယ်ရတာ ခုမှသိတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် သိပြီးသားဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခု မနွယ်နီသိနေပါပြီး။ ရန်ကုန်မှာကတော့ထားလိုက် အားလုံးက ပိုက်ဆံပေး၀ယ်ရတာချင်းအတူတူပဲလေ။
@ ကိုစေတန်ရေ ကျနော်လဲထောက်ခံပါတယ်။ ubuntu သင်တန်းလေးဖွင့်ပေးပါ။
ကို Box 02 ကျနော်မေးနေတာ အတည်မေးနေတာလေ။ နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော်သိချင်တာက Window7ကစပြီး pirate တွေကို အပီဖြိုတော့မှာလား အဲဒါကိုမေးတာပါခင်ဗျ။ ကျနော် နောက်တာလား အတည်ပြောတာလားသိအောင် smilies နဲ့ အမြဲဖော်ပြထားပါတယ်။ ကို Box 02 အထင်လွဲနေတာပါ။ ကို Box 02 ရေ ကျနော်က Linux ဆန့်ကျင်ရေးသမားတယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘန်းကျော်သားအများစု လို Bill Gates ကို နှစ်သက်သူ တယောက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကို Box 02 ကျနော်မေးနေတာ အတည်မေးနေတာလေ။ နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော်သိချင်တာက Window7ကစပြီး pirate တွေကို အပီဖြိုတော့မှာလား အဲဒါကိုမေးတာပါခင်ဗျ။ ကျနော် နောက်တာလား အတည်ပြောတာလားသိအောင် smilies နဲ့ အမြဲဖော်ပြထားပါတယ်။ ကို Box 02 အထင်လွဲနေတာပါ။
အော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုIstein .. sorry နော်.
Windows မှာ ဘာ plan တွေရှိလဲတော့ ကျနော်လဲ မပြောတက်ပါဘူး။ Windows က သူတို့ရဲ့ License ကိုတကယ်တမ်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်ရင်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးထိမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းလိုလိုမှာ illegal copy တွေရှိမှာပဲ။ ကျနော်လဲ မ၀ယ်ချင်လို့ အိမ်မှာသုံးဖို့ ခိုးကူးထားတာ ရှိပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာကျတော့ အမှန်အကန်နဲ့ သုံးရတာပါ။
windows လဲသုံး linux နဲ့သုံးတော့ ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့။ Linux နဲ့မရင်းနှီးသေးဘူး ubuntu ကိုစပြီး migrate လုပ်ချင်ရင်တော့ dual boot (MS Windows + Ubuntu) လုပ်ပြီးသုံးတာကောင်းပါတယ်။
ကိုIstein အဲဒီ Windows7pirate ကိစ္စကိုတော့ ကျနော် အမှန်မသိပါဘူး ခင်ဗျ။
ကျနော်သိချင်တာက Window7ကစပြီး pirate တွေကို အပီဖြိုတော့မှာလား အဲဒါကိုမေးတာပါခင်ဗျ။
ကို istein ကျွန်တော်ထင်တာလေးတစ်ခုပြောကြည့်မယ်နော်။
အပီဖြိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ (၂) ခုရှိမယ်ဗျ။
(၁) Microsoft က လုပ်တဲ့ အပိုင်း နဲ့
(၂) Government က လုပ်တဲ့ အပိုင်းပေါ့ဗျာ။
(၁) နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ ကျွန်တော်အခု vista ultimate sp1 သုံးတယ်ပေါ့ဗျာ။ sp1 မတင်ခင်က
vista ultimate နဲ့ပေါ့။ အဲဒီ vista တင်တဲ့ DVD က serial key မထည့်ရဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့
pirate လို့သတ်မှတ်တယ်ဗျာ။ တင်လည်းပြီးရော ကျွန်တော့စက်က Dell လို့ပြောတော့တာပါပဲ။
ကျွန်တော့်စက်က clone ဗျ။ sp1 တင်တော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တင်ခဲ့ရတာပါ။ မင်းစက်ကအင်ကြီး ဆိုပြီး သုံးမရအောင်လုပ်လိုက်မှာစိုးလို့ဗျ။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ တင်လို့ရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ဘ၀င်မကျတာက Microsoft က clone အတွက် vista မထုတ်ဘူးလားပေါ့ဗျာ။ အခုထိ
ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို vista ပို့လိုက်ပါဆိုရင် ခုနက DVD မျိုးပဲပို့ကြတယ်။ ဘာအဆင်မပြေလို့ clone မှာသုံးဖို့မရှိရတာလဲ။ ဒါ Microsoft က အဆင်မပြေအောင်လုပ်ထားလို့လားပေါ့။ ဒီလိုလုပ် တာ Microsoft ကဆိုရင်တော့ Windows7မှာ ပိုတင်းကျပ်လာစရာရှိပါတယ်။ အခု sp1 နဲ့ဆို
window defender တောင် update လုပ်လို့မရဘူးဗျာ။ ဒါကကျွန်တော်သိသလောက် မရတာလေ။ ကျွန်တော်မသိတဲ့မရတာတွေအများကြီးရှိဦးမယ်ထင်တယ်ဗျ။
(၂) နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာ ၂၀၁၀ မှာ copy right ကိစ္စ စမယ်လို့လက်မှတ်
ထိုးထားတာရှိတယ်တဲ့။ တကယ်စလာရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက လုပ်ရင် နည်းနည်းအစွန်းရောက်
ကိုကြီး စိုင်းစိုင်းစေတန်ကလည်း သင်ပေးပါတော့လို့ပြောနေမှကို...။ :d:d:d တော်ကြာ မြန်မာက အမျိုးကောင်းသားလေးတွေ ဒုက္ခရောက်မှာနော်...။ ဟီး..ဟီး..။ နောက်တာပါ။...အတည်ပါ...။ ခုသင်ပေးတော့နော်...။:):):)
အခု EDU ကို ဒီလ မတိုင်ခင် အမြန်ဆုံးပြောင်းပစ်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ သင်မယ်။ အခုလက်ရှိ MZ မှာ ပုံမှန် သင်ပေးမယ်လေ။ Ubuntu အောက်မှာပဲ ခွဲပြီး သင်ထားမယ်။
အရေးကြီးဆုံးအချက်က Edu ပြောင်းဖို့အမြန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပါ။ ၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။ ကျွန်တော် ဒီညက စပြီး လေ့လာထားမယ်။ Phpbb3 အပါအဝင်ပေါ့။ (Moodle နဲ့ vbulletin မသုံးမှာတော့ သေချာတယ် ) :67:
အိပ်ဦးနော် မအိပ်ပဲနဲ့လည်းမစဉ်းစားနဲ့ အစကတည်းက ဝနေတဲ့ ကိုယ် ပိုဝလာဦးမယ် ဗျ
ဝီကီ ပုံစံက wikiveristy ဆိုတာရှိတယ် အဲဒိလိုမျိုးလေးဆိုရင်ကော....
ကျနော်လည်း စိတ်၀င်စားပါတယ်။ ရန်ကုန်ကတောင် Ubantu စီဒီလှမ်းမှာပြီး တင်ကြည့်သေးတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်မှာသုံးမယ့် software တွေ (pagemaker, photoshop လိုဟာတွေ) လိုတာနဲ့ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ Linux ကိုလည်း အခြေခံကစ သိချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုသလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ စသဖြင့်ပေါ့။ ပရင်တာ ဒရိုင်ဘာတွေရှိသလား သိချင်ပါတယ်။ သင်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးပဲ။:77::77::77:
ကိုစေတန်ကို စိုင်းစိုင်း လို့ခေါ်တာ အခုမှာသိတယ်ဗျ။ သူက စိုင်းစိုင်း သီချင်းထဲကလို ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီသီချင်းလေ။
:65:လူငယ်တွေအားပေးတယ်၊ ကောင်မလေးတွေ လက်ခုတ်တီးတယ်။ :65:
:113: ကြိုဆိုပါတယ် နည်းပညာအသစ်တွေ လေ့လာဖို့ Ubuntu ကို
Ko Istein ရေ
နောက်ဆိုရင် window တွေကို register မလုပ်ပဲသုံးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်လေ။
အခုဒီမှာ သာ free နီးပါးသုံးလို့ရနေတာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ မပေးတော့ဘူးလေ။
နွယ်နီ့သူငယ်ချင်းတယောက် အပြင်ကိုသွားတော့ (ဘယ်နိုင်ငံလဲတော့မေးနဲ့နော် ကြောက်လို့)
သူ့ရဲ့ lap top ကို စစ်တယ်။ပြီးတော့ window က register version မဟုတ်လို့သူတို့မျက်စိရှေ့မှာတင် ဖြုတ်ချခိုင်းတယ်။lap top ကိုပါအတင်းသိမ်းမယ်လုပ်နေလို့မနည်းတောင်းပန်လာရတာ။ပြီးတော့ windowတင်မဟုတ်ဘူး ကျန်တဲ့ဆော့၀ဲ တော်တော်များများကိုလည်း ဖြုတ်ချခိုင်းတယ်။သူတို့ပြောတာကတော့လေ သူများပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ထားတာကို အလကားယူချင်တာ ရှက်စရာကောင်းတယ်တဲ့။သူ့ကိုအဲလိုပြောလွှတ်လိုက်လို့ နွယ်နီ့သူငယ်ချင်းဆို တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတာ။ ပြီးတော့ သူတို့က "မင်းမှာ စီဒီရှိလို့ ထပ်ပြီး တင်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အင်တာနက်သုံးတာနဲ့ တန်းသိတယ် လို့ပြောသေးတယ်တဲ့"တော်တော်လေးကို တင်းကြပ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်ပါ ဒီမှာက အဲဒါကို ၀ယ်သုံးရရင် မလွယ်ဘူးလေ အဲဒါကြောင့်ပါ။ lap top ယူပြီး အပြင်သွားမယ့်သူတွေ လည်း ဒီမှာကတည်းက ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ပါ။ကျေးဇူးတင်တယ်နော်....
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတယောက်လည်း ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်
သူကဘန်းကျော်သားတွေ အများဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံကိုသွားတာ
copy CD တွေခိုးပြီးယူသွားတာတောင် မိသွားလို့ ဒဏ်ငွေတောင်ဆောင်ခဲ့ရတယ်:O
(ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ ဘန်းကျော်ကပဲ အကောင်းဆုံးပါလို့ ဘာမဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ် ......ကလွဲလို့ပေါ့):D
(P.S ခြသေ့င်္တော့ပါရပါမည်) ::32::68::42:
အနော်လုပ်နေကြနည်းလေးပြောပြမယ်နော် :။hardisk ,memory stick တိုနဲ့ software တွေယူ ။ပြီရင် winrar ထဲတည့် Lock ချ။ folder တွေကို Lock ချ ။hardisk ကို lock ချ၊ ။ စစ်လိုမေးရင် လူ ကြုံယူလာတာ လို့ပြော :P ။ password မသိဘူးလိုပြော :P။ Ica တွေက ဒီလောက်ကြီအချိန်ပေးစစ်မှာတော့ ဟုတ်ဘူး။ ကိုနောက်မှာတခြားလူတွေ ရှိတယ်လေ။ ပေးတွားလိုက်လိမ်မယ်ထင် တယ်။ :65: ကံမကောင်ရင်တော့ jail ပေ့ ါ။ cd ဆိုရင် cover တွေမယူပါနဲ့ ။ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုဟာကို ပြန် burn ပြီ Password ခံနိုင်ရင် တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။
truecrypt ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အဓိကသုံးပြီး မိမိOS ကို မမြင်အောင်လုပ်လိုက်တာ။
စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ သူ့ရဲ့ဆိုက်မှာ စာသေချာဖတ်ပြီးစမ်းကြပေါ့။ ကျနော် နားလည်သလောက် ကတော့ သူက windows စပြီး boot လုပ်ဖို့ password တောင်းမယ်။ ခင်ဗျားမှာ password ကနှစ်ခုရှိရမယ်။ တစ်ခုက အယောင်ဆောင်၊ စစ်ဆေးရေးကတောင်းရင်ပေးရမယ့် password နဲ့ကျန်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ရဲ့ ဖိုင်တွေ သိမ်းထားတဲ့ OS အစစ်ရဲ့ password ဆိုပြီး။
အယောင်password ထည့်လိုက်ရင် မိမိရဲ့ သိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေ ဘာမှ ကိုမပါတဲ့၊ မမြင်ရတဲ့ OS တစ်ခုတက်လာမယ်။ password အစစ်ထည့်ရင်တော့ မိမိသိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေပါတဲ့ OS တက်လာလိမ့်မယ်။
ရှင်းပြတာ ပိုရှူပ်သွားရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အဲဒီဆိုက်မှာ သွားဖတ်လိုက်နော်။ ဒီလိုပဲ နဲနဲတော့ အပင်ပန်းခံရမှာပေါ့လေ။
မှတ်ချက်။ ။ သူက partition ခွဲရတဲ့ အပိုင်းတွေပါတယ်နော်။ နားမလည်ပဲ စွတ်ချလိုက်လို့ မိမိ data တွေပျောက်သွားလျှင်၊ မိမိအပြစ်နှင့် မိမိသာဖြစ်ပါကြောင်း။
i want to learn about of Ubuntu. pls learn me .:)
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ Ubuntu သုံးနည်းသင်တန်း အပြင် ကိုယ့် နာမည် နဲ့ ubuntu ကိုဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတာတွေ ဥပမာ emobuntu, satubuntu
တို့ လိုပေါ့ဗျာ ကိုစေတန် တစ်ချက်လောက်သင်ပေးပါဗျာ
ဒီလိုပြောကြကြေးဆိုရင် microsoft corporation ကိုယ်တိုင်ကိုကသူခိုး corporation ပဲခင်ဗျ
ရှေရှေဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ သူ့ရဲ့ သရဖူဆောင်းထားတဲ့ Active Directory Services ဆိုတာကရော ဘယ်ကနေ စုတုပြု (အမှန်တော့ခိုးထားတာဆိုရင်ပိုမှန်ပါတယ်) လုပ်ထားတာလဲ ဆိုတာဆရာ့ဆရာကြီးတွေပိုသိ ပါတယ်
မဟုတ်ရင် MS Fun တွေကျွန်တော့ကို တော်တော်မုန်းသွားပါလိမ့်မယ်
(မနွယ်နီစိုးကို ဖဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် အဲဒီလိုမေးတယ်ဆိုတဲ့လူကိုကျွန်တော်သာဆိုပြန်ကိုမေးမှာ ပြသနာတက်ကာမှတက်ရော)
တော့ပစ်ချော်သွားမယ်နော် အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ရေ ... Linux အကြောင်းပဲဆက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာ.....။
မင်းမှားနေတာ လင်းနစ်မဟုတ်ဘူး ဦးဘွန်တူကြီးကွ ဟဟ
ဟုတ်တယ်နော်... Linux ဆိုတာ စာလုံး၅ လုံးတဲရယ်... Ubuntu ဆိုတာက ၆ လုံး ချောတီး
ဂျစ်ကလေးကလည်း ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးကိုပဲ.....
Ubuntu CD လေးလိုချင်ပါတယ်
အဲမှာဒေါင်းလို့ရပါတယ်.. 700 mb ရှိပါတယ်...
ကိုမင်းသီဟရေ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ နေတယ်ဆိုရင်တော့ Active မှာဖြစ်ဖြစ်၊ National မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်လိုက်ပါလားဗျာ။ ကျွန်တော် တစ်ခါ down ဖူးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လက်မြှောက်လိုက်ရတယ်။
ကိုစေတန် ဆိုင်မှာရတယ်လို့ပြောတယ် ကျွန်တောင်တောင် သွားဝယ်မလို့ မအားသေးလို့
အဲဒီကောင်က......Linux comment တွေမလား....အာပေးတယ်ဂျာ...
ပြီးရင်...အချင်းချင်းတွေ....ပြန်လိုက်.....IP က တစ်ခုတည်း.....ဟဲဲဟဲ...
i am very :Ointeresting it,the class.please inform:)) me it is
I'm also waiting to learn Ubuntu. When the lessons start, Please send meaPM.
ကျနော်လည်း linux ကိုစိတ်ဝင်စားလို ့ပါ:39:
Linux က သင်တန်းမလိုဘူးဗျ။ လိုတာက internet connection။ internet connection ရှိရင် Linux နဲ့ သုံး။ သုံးနေရင် လိုတာလေးတွေ ရှိလာမယ်။ online မှာရှာ။ ရှာလို့တွေ့တဲ့အတိုင်းလုပ် ရသွားလိမ့်မယ်။ ebook တွေလည်း ပေါတယ်ဗျ။ online မှာ resource တွေအများကြီး။ software တွေကလည်း FOSS တွေပဲဗျ။ အဲ.. connection ရှိဖို့ပဲလိုတာ။
ubuntu နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာလို လေ့လာချင်ရင်တော့
မှာ သွားလေ့လာလို့ ရပါတယ်။ ubuntu သုံးတဲ့ ဘလောဂါတွေ ရေးထားတဲ့ ပို့စ် တော်တော်များများကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ မရှင်းတာ ရှိရင်လည်း MZ မှာရော၊
မှာ သွားရောက် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Linux က သင်တန်းမလိုဘူးဗျ။ လိုတာက internet connection။ internet connection ရှိရင် Linux နဲ့ သုံး။ သုံးနေရင် လိုတာလေးတွေ ရှိလာမယ်။ online မှာရှာ။ ရှာလို့တွေ့တဲ့အတိုင်းလုပ် ရသွားလိမ့်မယ်။ book တွေလည်း ပေါတယ်ဗျ။ online မှာ resource တွေအများကြီး။ software တွေကလည်း FOSS တွေပဲဗျ။ အဲ.. connection ရှိဖို့ပဲလိုတာ။
hello dear KO Saturn
i want to know which open source software can i use without internet connection.
i want to it as home use. if it is where can i download, how to install and how to use.
i don't know more about open source so i want to know clearly and detail